Sintomy ny horonan-tsary Udemy Course miaraka amin'i Udeler | Ubunlog
Udeler dia fampiharana fisintomana loharano misokatra ary multiplatform izay ahafahanao misintona horonantsary Udemy amin'ny PC-nao maimaim-poana. Udeler dia voasoratra amin'ny electron hananana mpampiasa fampiasa minimalist, intuitive ary mitovy fanamiana amin'ny Linux, Mac ary Windows OS.
Amin'izao fotoana izao dia misy ivon-toeram-pampianarana fianarana an-tserasera marobe. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fandaharana sy lohahevitra momba ny siansa momba ny solosaina, fa ny hafa kosa manana lohahevitra midadasika kokoa. Maimaimpoana na karama tanteraka ny tranonkala sasany, ary ny hafa manolotra fampianarana maimaim-poana sy maimaim-poana.
Toa an'i Khan Academy sy Code Academy, Udemy tsy vaovao izy amin'ity faritra ity. Izy io dia tranonkala iray ahafahanao mianatra karazana fampianarana an-tserasera isan-karazany amin'ny hafainganananao., miaraka amin'ny sasany amin'izy ireo misy malalaka.
Ny olana, na izany aza, izany Indraindray ireo mpampiasa dia terena hanaraka horonan-tsary fotsiny rehefa mifandray amin'ny Internet, satria tsy misy safidy teratany hampidina ireo horonan-tsary momba ny Mazava ho azy fa hijerena azy any aoriana, indrindra rehefa ivelan'ny Internet ny mpampiasa.
Soa ihany Miaraka amin'i Udeler, azonao atao ny mamaha io fetra io ary mijery ireo horonan-tsary na aiza na aiza no tianao. Amin'ity dia manana ny fahafaha-mampiseho ny lisitry ny taranja rehetra anananao izahay ary afaka misintona azy ireo.
1 Udeler Features
2 Ahoana ny fametrahana an'i Udeler amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Fahaizana misafidy kalitaon'ny horonantsary
Afaka misintona fampianarana marobe amin'ny fotoana iray.
Ajanony na avereno ny fisintomana amin'ny fotoana rehetra.
Safidio ny lahatahiry fampidinana.
Multilingual (Anglisy, Italiana, Espaniola)
ihany koa ny mpamorona ny rindranasa dia milaza amintsika zavatra lehibe indrindra ary tompon'andraikitra amin'ny fampiasana ilay rindranasa:
Ity rindrambaiko ity dia natao hanampiana anao hampidina fampianarana avy any Udemy ho an'ny fampiasanao manokana irery. Ny fizarana ny atin'ny fianaranao voasoratra anarana dia voarara tanteraka eo ambanin'ny Fepetra fampiasana Udemy. Ny taranja Udemy tsirairay avy dia iharan'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ity rindranasa ity dia tsy maka majika amin'ny alàlan'ny majika misy fandaharam-pianarana karama hita ao amin'ny Udemy, tsy maintsy manome ny fahazoanao miditra fidirana Udemy ianao mba hisintomana ireo fampianarana nosoratanao.
Udeler dia misintona ireo horonantsary fihaonambe amin'ny alàlan'ny fampiasana fotsiny ny loharanon'ilay mpilalao video naverin'i Udemy tamin'ny mpampiasa azy. Aorian'ny fanamarinana mety dia azonao atao ihany koa ny manao izany amin'ny tanana. Mpandrindra fampidinana maro no mampiasa fomba mitovy amin'izany hanintonana horonan-tsary amin'ny pejin-tranonkala. Ity fampiharana ity dia tsy mandeha ho azy afa-tsy ny fizotry ny mpampiasa manao an'io amin'ny tanana amin'ny tranokala.
Ahoana ny fametrahana an'i Udeler amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Mba hametrahana Udeler amin'ny Ubuntu sy ny derivatives, araka ny efa voalaza, ny fampiharana dia natsangana niaraka tamin'ny fanampian'ny elektronika ny fametrahana dia hatao amin'ny alàlan'ny fisie AppImage ary io no ho iray hanampy antsika hampidina ireo horonantsary Udemy.
Ho an'ity tsy maintsy manokatra terminal isika Azonao atao ny mampiasa ity hitsin-dàlana manaraka CTRL + ALT + T.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny manamarina hoe inona ny rafitr'ity rafitra ity, noho izany no ahafahantsika manatanteraka ity baiko ity:
Raha vantany vao fantatra ny rafitry ny rafitra, izao dia mila mankany amin'ny tranokalan'ny tetikasa fotsiny isika ary ao amin'ny fizarana fampidinana, handeha hisintona ny rakitra mifanaraka amin'ny maritrano izahay.
Na inona na inona ny maritrano, afaka mampiasa wget izy ireo hisintomanaMila manao an'io amin'ny fomba manaraka fotsiny izy ireo, eto aho dia maka ny kinova farany azo ampiasaina ho referansa.
Solo tsy maintsy manome alalana famonoana isika amin'ny fisie vao nakarina:
Farany fotsiny apetrakay amin'ny:
Rehefa mihazakazaka voalohany ny rakitra ianao dia hanontaniana raha te hampifandray ilay programa amin'ny rafitra ianao. Raha misafidy izany izy ireo, raha tadiavin'izy ireo ny fampidirana dia ampidirina amin'ny menio fampiharana sy sary famantarana fametrahana. Raha misafidy ny 'tsia' izy ireo dia tsy maintsy manomboka azy hatrany amin'ny fikitihana indroa amin'ny AppImage.
Raha vantany vao mandefa ilay fampiharana ianao, dia hiseho ny efijery fidirana hampidiranao ireo mari-pahaizana momba ny kaonty Udemy. Vantany vao vita izany dia afaka miditra mivantana amin'ireo horonantsarinao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Sintomy ny Udemy Course Videos miaraka amin'i Udeler
Mikail dia hoy izy:
Tsy mandeha izy fa mitoetra ao amin'ny "fananganana tahirin-kevitra momba ny fampianarana"
Valiny tamin'i Mikail
Josst dia hoy izy:
Efa fantatr'izy ireo ilay bibikely ary miasa izy ireo manamboatra azy io haingana araka izay tratra. Apetrany ao amin'ny tranonkala GitHub izany.
Navelan'i Hos ny rohy ho an'izay te-hahita azy.
Valiny tamin'i Josst
Luis Torres dia hoy izy:
Midira amin'ny mailaka sy teny miafiko aho ary miteny hoe ¨tsy misy taranja hita¨
Valiny tamin'i Luis Torres
Misaotra Ny fampivoarana farany dia miasa tanteraka.
Impiry no azo sintonina ny taranja iray?
Salama. Rehefa miditra amin'ny kaontiko aho dia tsy miseho amin'ny fampiharana Udeler ireo fampianarana. Mety hoe manana kaonty hafa ao amin'ilay pejy ny kaontiko?
Ity pejy ity dia ity manaraka ity izay ampidiriko ireo taranja:
Nametraka azy aho, fa tsy haiko ny mamily azy amin'ny terminal.
Salama azoko ity:
(udeler: 5998): Pango-ERROR **: 14: 25: 18.156: Harfbuzz version taloha loatra (1.4.2)
Tsy mamela ahy hiditra ny anarako izy, ny marina dia toa tsy mandeha, nametraka solonanarana sy tenimiafiko aho ary tsy nanao na inona na inona
I Udeler dia fitaovana tsara tokoa hampidinana ny horonan-tsary Udemy, misaotra anao noho ity hafatra mahafinaritra nataonao ity!
Na izany aza, aleoko mampiasa VideoHunt Free Online Video Downloader satria tsy te-hametraka rindrambaiko fanampiny amin'ny solosainako aho. Ankoatr'izay, maimaim-poana sy mora ampiasaina izy io.
Mamaly an'i Chabo
rehefa avy nampiasaina am-bolana maro aho izao dia tafahitsoka sy tsy mahomby rehefa misy Attachement
Mamaly an'i xavier
Vidal dia hoy izy:
Tsy ilaina intsony izany, efa lany andro be io vaovao io
Valiny tamin'i Vidal
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu ho any Ubuntu 18.04